Imboni Yemithi - i-Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd.
LIphampu ye-ead ye-Fluid Peristaltic iyipompo yase-china ye-peristaltic, umkhiqizi wephampu ye-peristaltic e-China.Ihileleke kakhulu ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizeni nasekuthengisweni kwamaphampu e-peristaltic, amaphampu esirinji, amaphampu egiya anembayo namanye amaphampu okudlulisa uketshezi olunembayo nezinye izinto ezihlobene nawo, futhi yenza ukuklama nokuthengisa kwezinhlelo ezihlukahlukene zokulawula uketshezi oluhlakaniphile.Retrofit kanye nokubonisana lobuchwepheshe.
Kusukela ekusungulweni kwayo kuze kube manje, i-Lead Fluid ibilokhu ibambelele emcabangweni wokuqamba izinto ezintsha, ukuqina, ubuqotho, ukusebenzisana kweqembu, kanye nekhasimende kuqala.Ithembele kusizinda sayo semboni kanye nezinzuzo zobuchwepheshe, iye yathuthukisa ngokuqhubekayo uchungechunge lwemikhiqizo ethuthuke emhlabeni wonke, izuza ukwethenjwa nokwazisa kwamakhasimende.
Ucwaningo lwezemithi, ukuthuthukiswa kanye nezinqubo zokukhiqiza zidinga ubunyumba, ukuhlukaniswa koketshezi kanye namandla angenawo ukungcola ukuze kuqinisekiswe izinga eliphezulu lenqubo nokuphepha komkhiqizo embonini yezemithi.
Ukugeleza koketshezi oluyinyumba kubaluleke kakhulu ezinhlelweni zezokwelapha, yingakho amaphampu e-Lead Fluid peristaltic efaneleka kakhulu kulezi zinqubo ezidingekayo.
Ngokuqubuka kwalolu bhubhane ngo-2020, i-biosecurity isiphenduke isu elibalulekile likazwelonke.Kufanele sikulungele ngokugcwele ukwamukela intuthuko yedijithali, enenethiwekhi, nehlakaniphile kanye noguquko lwezimboni.
Amaphampu e-lead Fluid peristaltic ahlinzeka ngesistimu evalwe ngokuphelele yokulawula ukugeleza kwe-aseptic/okuyinyumba okungangcolisi.Ubunyumba, ukuhlukaniswa koketshezi, ukungcola okuyiziro.
Iphampu ye-peristaltic eguquguqukayo ye-BT103S
1. Injini ye-stepper enembayo ephezulu, iphutha lokunemba isivinini <± 0.2%, ibanga lesivinini 0.1-100rpm, isilawuli se-loop esivaliwe.
2. Sekela uxhumano lwe-WIFI kanye nesilawuli kude se-APP yeselula.
3. Ukuvimbela ukuphazamiseka okuqinile, ukuvikela okuqinile, ukuma kwejubane eliphansi, umsebenzi wokumunca emuva, umsebenzi wokukhiya ukhiye, i-alamu yerotor ekhiyiwe, i-alamu yokuvuza okuwuketshezi (ongakukhetha).
4. Ukusekela i-5 ~ 24V i-voltage ebanzi yokufakwayo kokulawula kwangaphandle, ukuxhumana kwe-RS485, okuhambisana ne-MODBUS protocol.
I-BT600F-V3 ekhipha iphampu ye-peristaltic ehlakaniphile
1. 4.3-inch super HD LCD isibonisi sesikrini sokuthinta kanye nokusebenza.
2. Imodi yokugeleza, ukukhishwa kwevolumu ye-liquid, ukukhipha isikhathi, ukusabalalisa umjikelezo (ukuhlelwa) izindlela eziningi zokusabalalisa ziyazikhethela.
3. Sekela ukuxhumeka kwe-WIFI, ukusebenza okukude kwe-APP yeselula, futhi ube nemisebenzi yokuqapha efana ne-alamu yokuvala shaqa kanye nesikhumbuzi sokushintsha ishubhu yepompo.
4. Inemisebenzi ebheke emuva ebuyela emuva, indawo yokuqala, isivinini esigcwele, i-suck back, kanye nokumisa isikhathi.
Iphampu ye-WSP microliter peristaltic
1. Ukunemba okuphezulu kokugcwalisa, iphutha lingaphansi kuka-±0.2%.
2. Idizayini ye-modular, kulula ukunwebeka, amaphampu amaningi angafakwa ukuze akhe uhlelo lokugcwalisa lweziteshi eziningi.
3. Ukunemba okuphezulu kwe-servo motor drive, i-torque enkulu, ukugcinwa kwamahhala, Isakhiwo seshubhu ye-Rotary, ukusebenza kahle okuphezulu.
4. I-tube yepompo iphansi ekulahlekelweni, impilo yesevisi eqhubekayo ifika emahoreni angu-1000, izinga lokunciphisa amahora angu-12＜1%.
5. Umsebenzi wokudonsa emuva, ukuconsa ku-zero, ukuvala shaqa ngokushesha.
6. Ipayipi elihlanzekile kakhulu, kulula ukuliqaqa, kulula ukulihlanza nokubulala amagciwane, lisekela i-CIP ne-SIP.
7. Ipayipi akulula ukuvinjwa, futhi lingakwazi ukubhekana kalula nezinto ezitholakala kalula futhi zibe ne-viscosity ethile njengobuhlalu kazibuthe, i-glycerin, njll.
8. Ingasetshenziswa ngesandla noma isetshenziswe ngomugqa wokukhiqiza othomathikhi.
I-Baoding Lead Fluid Technology Co., Ltd. igxile ekwakhiweni, ekuthuthukisweni, ekwenziweni nasekukhangiseni kwamaphampu e-peristaltic namaphampu esirinji anembayo, futhi izibophezele ekuhlinzekeni abasebenzisi ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu namasevisi aphelele ezobuchwepheshe.Ngaphezu kokuba nochungechunge oluphelele kakhulu lwamaphampu e-peristaltic kanye nemigqa yomkhiqizo wepompo yesirinji, I-Lead Fluid ingaphinda ihlinzeke ngezinsizakalo ezenziwe ngokwezifiso ze-OEM ngokuya ngezidingo zomsebenzisi.Umuzwa wokuthuthukiswa komkhiqizo ovuthiwe we-Lead Fluid ungakunikeza isiqondiso esisheshayo sohlelo lokusebenza neziphakamiso zamaphampu e-peristaltic namaphampu esirinji, futhi unikeze abasebenzisi ngekhwalithi ephezulu, ukunemba okuphezulu, kanye nokulethwa koketshezi okungabizi kakhulu.